झापा : झोलुंगे पुल, सडक, विद्युत् र सुरक्षाकर्मी पुगेसँगै मेचीपारिका नागरिकले ‘नेपाली’ महसुस गर्न थाले । सदरमुकाम आउन मेची नदीले रोक्छ । गाउँमा न विद्युत् छ न त बाटो नै । गाउँसम्म सुरक्षा’कर्मी पनि पुग्दैनन् ।
मेची नदीवारि आउँदा आफ्नै देशमा विदेशीको जस्तो व्यव’हार खे’प्नुपर्छ । यो समस्या केहीअघिसम्म झापा भद्रपुर–३ मेचीपारि महेशपुरका नागरिकले भोगेका थिए । अहिले उनीहरूको यो समस्या बिस्तारै सामा’धान हुँदै छ ।
मेचीपारिको बस्तीमा करिब १५० घर–परिवार छन् । यसअघि यो बस्ती राज्यको नजरबाहिरै थियो । आफ्नै देशमा ‘विदेशी’ भएर बसेका मेचीपारिका जनता राज्यको नजरमा पर्न थालेका छन् । सामान्यतः पूर्वमा भारतसँगको सिमाना मेची नदीलाई लिने प्रचलन छ । तर, मेचीपारि पनि नेपालको ठूलो बस्ती छ ।
यो बस्ती वषौँदेखि राज्यबाट उपेक्षित छ । जिल्लाको सदरमुकाम रहेको नगरपालिकामा भएर पनि विकासमा पछि परेको छ, मेचीपारि । ब’र्खामा मेची नदी ओर्ले’र आउँदा भारतीय बजारकै भर पर्नुपर्थ्यो ।
तर, एक वर्षअघि मेची नदीमा झोलुं’गे पुल बनेसँगै उनीहरू भ’द्रपुर बजारसँग जोडिएका छन् । ‘बर्खामा त नदी उर्लेर आउँथ्यो । नाउमै चन्द्रगढी बजार जानुपथ्र्यो । त्यहाँ जो’खिम मोलेर जानुभन्दा त भारतको बजारमा जानुनै ठीक हुन्थ्यो,’ मेचीपारिका सचिन राजवंशी भन्छन्, ‘हिउँदमा पनि बाइक तार्न सकिँदैनथ्यो । अब त झो’लुंगे पुल बन्यो । बर्खा र हिउँदमै आफ्नै देशको बजार जान पाएका छौँ ।’
वर्षौँदेखि देशको ‘जंगेपिलर’का रूपमा बसेका मेचीपारिका वासीलाई चन्द्रगढी बजार आउँदा नेपाली नै होइन कि भनेर शंका गर्ने गर्थे । तर, अब बिस्तारै उनीहरूले पनि सम्मान पाउन थालेका छन् । ‘चन्द्रगढीतिर जाँदा धेरै केरकार गर्थे । घर मेचीपारि भन्दा इन्डि’यन हो कि क्यो हो भन्थे । नागरिकता बनाउन जाँदा पनि शं’का मात्र गर्थे,’ राजवंशी भन्छन्, ‘अब त सुरक्षाकर्मी यहीँ आउनुभएको छ । हामीले बल्ल सम्मान पाउन थालेका छौँ ।’
पुल, सडक पुगेसँगै ‘नेपाली’ महसुस !
पुल, सडक, विद्युत् र सुरक्षाक’र्मी पुगेसँगै मेचीपारिका नागरिकले ‘नेपाली’ महसुस गर्न थालेका छन् । ‘बाटो, पुल बन्यो, बिजुली आयो । सुरक्षाक’र्मी पनि आएपछि त हामी अब पूरा नेपाली भयौँ,’ स्थानीय सूर्य गुप्ता भन्छन्, ‘पहिला त कर्मचारीले पनि यो ठाउँ नेपाल हो र ? भन्थे । बर्खामा नाउ कहिले खुल्ने हो थाहा हुँदैनथ्यो ।
सागस’ब्जी लिन पनि भारत जानुप’थ्र्यो । अब त आफ्नै देश सजिलै जान सकिन्छ ।’ शिक्षाका लागि मेचीपारि आधा’रभूत तहको विद्यालय छ । आधारभूत तहको शिक्षा यहीँ पाउन थालेका छन्, उनीहरू । को’रोना महामा’रीका समयमा नाकामा बसेका सश’स्त्र प्र’हरी अहिले पनि त्यहीँ छन् । जसका कारण आफूहरूले सुरक्षा महसुस गर्न पाएको ७० वर्षीय वृ’द्ध जीवन राजवंशी बताउँछन् ।
पहिला त चो’रडा’का लागेर बस्नै नसक्ने हुन्थ्यो । उता(भारत)पट्टी एसएसबी बस्यो । त्यसपछि चोर आउन छाडे,’ उनी भन्छन्, ‘अब त हाम्रा सश’स्त्र आएर बसेका छन् । जसका कारण हामीलाई ढुक्क भएको छ । पहिलाको तुलनामा विकास धेरै भएको छ । पहिला जे गर्न पनि ग’लगलिया जानुप’र्थ्यो । अब आफ्नै देश जान पुल, बाटो बन्यो ।’
वि’भेद अ’न्त्य हुँदै !
विगतमा आफ्नै देशबाट हे’पिएको अनुभव छ, मेचीपारिका वासीसँग । आफ्नै देशमा काम गर्न जाँदा पनि भारतीय भन्दै उनीहरू वि’भेदमा पर्ने गरेका थिए । तर, अब सुरक्षा नि’काय नै आएपछि भने वि’भेद हटेको स्थानीय कपिलेश्वर महतो बताउँछन् । ‘अब त हामी नेपाली हौँ भनेर सरकारले चिन्यो । त्यसैले त यहाँसम्म सश’स्त्र पनि पठायो,’ उनी भन्छन्, ‘अब त हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैन । हे’पेको पनि छैन ।’
विगतमा छोराछोरीलाई माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि विद्यालय पठाउन पनि मु’स्किल थियो । तर, अब पुल बनेपछि भने भद्रपुरसम्म बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन पनि सहज भएको स्थानीय वृ’द्ध श्रीप्रसाद महतो बताउँछन् । ‘जति कष्ठ भोग्नु पहिल्यै भोगियो । अब त पहिलाको हेरेर धेरै सुख छ । यहाँ ८ कक्षासम्म स्कुल छ । त्यसपछि पढाउन भद्रपुर पठाउनुप’थ्र्यो ।
बर्खामा खोलाको बाढीले गर्दा विद्यालय जान सक्दैनथे,’ उनी भन्छन्, ‘अब त खोलामा पुल बन्यो । केटाकेटीलाई राम्रो स्कुल पठाउन पनि सक्ने भयौँ ।’तर, झो’लुंगे पुलआसपास तटब’न्धन नगर्दा ब’र्खामा समस्या हुने हो कि भन्ने चि’न्ता छ, स्थानीयलाई । ‘अहिले बाटो भएको ठाउँसम्म खोला आउँछ । पुल त बनाए । हिँड’डुल गर्न सुरु पनि भयो । तर, ब’र्खामा बाटो बगाएर हिँड्ने ठाउँ हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छ महतो भन्छन्, ‘यहाँ सरकारले तट’बन्धन गरिदिए राम्रो हुने थियो । ब’र्खामा ना’उ पनि चढ्नुपर्ने थिएन ।’
पक्की सडक र बाढीबाट सुरक्षाको माग !
राज्यबाट सधैँ टाडा रहेका मेचीपारिका वासीले गाउँमा का\_लोप’त्रे र ब’र्खाको बाढीबाट जोगिने उपयुक्त वि’कल्प सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘गाउँमा विजुली आयो, पुल बन्यो, नयाँ बाटो पनि बनेको छ । तर, बर्खामा हिलोले गर्दा हिँड्नै नसक्ने हुन्छ,’ स्थानीय हावालाल राजवंशी भन्छन्, ‘यहाँ बाटो पिच गरिदिए हुने । ब’र्खामा खोलायता पस्छ कि भन्ने डर हुन्छ । यसलाई सरकारले हेरिदिए हुने ।’
विकासका दृ’ष्टिकोणले पछि परेको मेचीपारिको महेशपुरलाई विकाससँग जोड्ने प्रय’त्नमा लागेको सोही ठाउँबाट वडा’सदस्यमा निर्वाचित अरुण राजवंशी बताउँछन् । ‘विग’तमा कसैको नजर परेन यस बस्तीमा । अब बिस्तारै विकासको काम सुरु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेचीपारिको महेशपुर क्षेत्रमा पनि वारिजस्तै विकास गर्छौँ । त्यसका लागि मैले नगरपालिकासम्म कुरा पु¥र्‍याइरहेको छु ।’नयाँ पत्रीका बाट
२०७७ चैत्र ५, बिहीबार ०१:५९ गते 1 Minute 803 Views